Valentine's Day မှာ ဒင်နာဒိတ်တဲ့အခါ အလှဆုံးဖြစ်နေအောင် ဘာတွေ ဝတ်ကြမလဲ? - For her Myanmar
ခေါင်းမစားသင့်တော့ပါ မင်မင်ရောက်လာပါပြီ 😛
Valentine’s Day နီးလာပြီဆိုတော့ ချစ်သူနဲ့ ဘယ်သွားမယ် ဘာစားမယ်ဆိုတာတွေ တိုင်ပင်ပြီးကြပြီ ဟုတ် ? အဲ့အခါမှာ ခေါင်းစားစရာ ပြဿနာကတော့ ဘာဝတ်သွားရမလဲဆိုပြီး စဉ်းစားရတာပါပဲ။ ကိုယ်တွေကလည်း ခက်သားလား… ဘယ်လောက်အင်္ကျီတွေ ဝယ်ဝယ် သွားစရာလာစရာရှိရင် ဝတ်စရာကို မရှိတော့တာ (ဖြစ်နေကျ ဟုတ်?) ပြီးတော့ ချစ်သူနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ ရင်းနှီးတယ်ဆိုဆို ဒီလို အမှတ်တရဖြစ်နေမယ့် နေ့လေးတွေမှာတော့ လှလှပပ ဖြစ်ချင်သေးတာကိုး… ဒါကြောင့်မို့ ယောင်းတို့ကို Stella က Valentine’s Day date night မှာ ဘယ်လို outfit လေးတွေကို ဝတ်ရမလဲဆိုတာ ဝေမျှပေးသွားမယ်နော်…
ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းကို ပေါ်လွင်စေမယ့် ခြေသလုံးအလယ် dress မျိုးတွေက ယောင်းကို ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှနေစေပါတယ်။ အဆင်ရှုပ်ရှုပ်တွေ၊ အတွန့်အဖတ်အများကြီးပါတဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးတွေထက် နောက်ကျော (သို့မဟုတ်) ရင်သားအလှကို ပေါ်လွင်စေမယ့် ဗြောင်ဒီဇိုင်းတွေကို ရွေးဝတ်ပါ။ clutch လက်ကိုင်အိတ်တွေ ဒေါက်အမြင့်တွေနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးပါ။ ဒီလို ဝတ်စုံတွေကို ရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းရဲ့ ကိုယ်လုံးနဲ့ တစ်သားတည်း ဖြစ်နေမယ့် size ကို သေချာရွေးဖို့တော့ လိုမယ်နော်။
Related article >>> ၂၀၁၉မှာ ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်လာမယ့် ဖက်ရှင်Trend (၇) ခု
ညနေခင်းဝတ်စုံအရှည်တွေကတော့ ဟိုတယ်ဒင်နာသွားစားမယ့်သူတွေ ဝတ်သင့်ပါတယ်နော်.. စင်ဒရဲလားလေးလို လှနေစေမှာမို့ ယောင်းချစ်သူရဲ့ မျက်လုံးတွေက ယောင်းဆီက ဖယ်ခွာသွားတော့မှာကို မဟုတ်ဘူးရယ် 😀 Evening dress နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးကတော့ classic ဆန်ဆန် လေးထောင့် Clutch အိတ်တွေနဲ့ ကြိုးသိုင်းဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ကုတ်ပုံစံ တွေက ယောင်းကို စမတ်ကျကျအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အသွင် အပြည့်ပေးပါတယ်။ လူကြီးဆန်ပြီး ရင့်ကျက်တဲ့ ဒီဝတ်စုံနဲ့ လိုက်ဖက်အောင်ဆိုရင်တော့ ထိပ်ပိတ် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တွေကို စီးပေးပါနော်…
မိန်းကလေးဆန်ဆန် စကတ်တွေကိုလည်း မေ့ချန်ထားခဲ့လို့ မရပါဘူး ယောင်းတို့… စကတ်လွင့်လွင့်လေးတွေကို အင်္ကျီလက်ရှည်လေးတွေနဲ့ တွဲဝတ်တာက ချစ်သူများနေ့မှာ ချစ်စရာမိန်းကလေးတစ်ယောက်လို လန်းလန်းဆန်းဆန်းလှနေနိုင်ပါတယ်။ ဒီ outfit နဲ့ လိုက်ဖက်တာကတော့ ကြိုးသိုင်း cross body အိတ်လေးတွေပါ။ ဖိနပ်အနေနဲ့ကတော့ ဒေါက်မြင့်၊ ဒေါက်နိမ့်၊ လေဒီရှူး၊ sneaker စသည်ဖြင့် ယောင်းနှစ်သက်ရာ စီးနိုင်ပါတယ်နော်။
ကဲ.. ဝတ်စုံတွေလည်း ရွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ နောက်ဆုံး ဆောင်ရမယ့် တစ်ချက်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်… ဒါကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုပါပဲ… ဘယ်လောက်ပဲ လှအောင်ဆင်ထားထား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမှ မရှိရင်တော့ အလကားပါပဲ ယောင်းတို့ရေ…
ခေါငျးမစားသငျ့တော့ပါ မငျမငျရောကျလာပါပွီ 😛
Valentine’s Day နီးလာပွီဆိုတော့ ခဈြသူနဲ့ ဘယျသှားမယျ ဘာစားမယျဆိုတာတှေ တိုငျပငျပွီးကွပွီ ဟုတျ ? အဲ့အခါမှာ ခေါငျးစားစရာ ပွဿနာကတော့ ဘာဝတျသှားရမလဲဆိုပွီး စဉျးစားရတာပါပဲ။ ကိုယျတှကေလညျး ခကျသားလား… ဘယျလောကျအင်ျကြီတှေ ဝယျဝယျ သှားစရာလာစရာရှိရငျ ဝတျစရာကို မရှိတော့တာ (ဖွဈနကြေ ဟုတျ?) ပွီးတော့ ခဈြသူနဲ့ ဘယျလောကျပဲ ရငျးနှီးတယျဆိုဆို ဒီလို အမှတျတရဖွဈနမေယျ့ နလေ့ေးတှမှောတော့ လှလှပပ ဖွဈခငျြသေးတာကိုး… ဒါကွောငျ့မို့ ယောငျးတို့ကို Stella က Valentine’s Day date night မှာ ဘယျလို outfit လေးတှကေို ဝတျရမလဲဆိုတာ ဝမြှေပေးသှားမယျနျော…
ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးကို ပျေါလှငျစမေယျ့ ခွသေလုံးအလယျ dress မြိုးတှကေ ယောငျးကို ဆှဲဆောငျမှုရှိရှိလှနစေပေါတယျ။ အဆငျရှုပျရှုပျတှေ၊ အတှနျ့အဖတျအမြားကွီးပါတဲ့ ဒီဇိုငျးမြိုးတှထေကျ နောကျကြော (သို့မဟုတျ) ရငျသားအလှကို ပျေါလှငျစမေယျ့ ဗွောငျဒီဇိုငျးတှကေို ရှေးဝတျပါ။ clutch လကျကိုငျအိတျတှေ ဒေါကျအမွငျ့တှနေဲ့ အလိုကျဖကျဆုံးပါ။ ဒီလို ဝတျစုံတှကေို ရှေးမယျဆိုရငျတော့ ယောငျးရဲ့ ကိုယျလုံးနဲ့ တဈသားတညျး ဖွဈနမေယျ့ size ကို သခြောရှေးဖို့တော့ လိုမယျနျော။
Related article >>> ၂၀၁၉မှာ ရပေနျးအစားဆုံးဖွဈလာမယျ့ ဖကျရှငျTrend (၇) ခု
ညနခေငျးဝတျစုံအရှညျတှကေတော့ ဟိုတယျဒငျနာသှားစားမယျ့သူတှေ ဝတျသငျ့ပါတယျနျော.. စငျဒရဲလားလေးလို လှနစေမှောမို့ ယောငျးခဈြသူရဲ့ မကျြလုံးတှကေ ယောငျးဆီက ဖယျခှာသှားတော့မှာကို မဟုတျဘူးရယျ 😀 Evening dress နဲ့ အလိုကျဖကျဆုံးကတော့ classic ဆနျဆနျ လေးထောငျ့ Clutch အိတျတှနေဲ့ ကွိုးသိုငျးဒေါကျမွငျ့ဖိနပျတှဖွေဈပါတယျ။
ကုတျပုံစံ တှကေ ယောငျးကို စမတျကကြအြမြိုးသမီးတဈယောကျအသှငျ အပွညျ့ပေးပါတယျ။ လူကွီးဆနျပွီး ရငျ့ကကျြတဲ့ ဒီဝတျစုံနဲ့ လိုကျဖကျအောငျဆိုရငျတော့ ထိပျပိတျ ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျတှကေို စီးပေးပါနျော…
မိနျးကလေးဆနျဆနျ စကတျတှကေိုလညျး မခေ့နျြထားခဲ့လို့ မရပါဘူး ယောငျးတို့… စကတျလှငျ့လှငျ့လေးတှကေို အင်ျကြီလကျရှညျလေးတှနေဲ့ တှဲဝတျတာက ခဈြသူမြားနမှေ့ာ ခဈြစရာမိနျးကလေးတဈယောကျလို လနျးလနျးဆနျးဆနျးလှနနေိုငျပါတယျ။ ဒီ outfit နဲ့ လိုကျဖကျတာကတော့ ကွိုးသိုငျး cross body အိတျလေးတှပေါ။ ဖိနပျအနနေဲ့ကတော့ ဒေါကျမွငျ့၊ ဒေါကျနိမျ့၊ လဒေီရှူး၊ sneaker စသညျဖွငျ့ ယောငျးနှဈသကျရာ စီးနိုငျပါတယျနျော။
ကဲ.. ဝတျစုံတှလေညျး ရှေးပွီးသှားပွီဆိုတော့ နောကျဆုံး ဆောငျရမယျ့ တဈခကျြပဲ ကနျြပါတော့တယျ… ဒါကတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုပါပဲ… ဘယျလောကျပဲ လှအောငျဆငျထားထား ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုမှ မရှိရငျတော့ အလကားပါပဲ ယောငျးတို့ရေ…
Tags: Dress, Fashion, skirt, Style, tips, valentine, Valentines Day, what to wear